पोर्टेबल सुपर फास्ट-हीट ह्यान्डहेल्ड स्टीमर किन्नुहोस् - नि: शुल्क शिपिंग र कुनै ट्याक्स छैन WoopShop®
पोर्टेबल सुपर फास्ट-हीट ह्यान्डहेल्ड स्टीमर
बाट जहाज चीन पोल्याण्ड रूसी संघ स्पेन संयुक्त राज्य अमेरिका फ्रान्स बेल्जियम
गुलाबी / चीन गुलाबी / पोल्याण्ड गुलाबी / रूसी संघ गुलाबी / स्पेन गुलाबी / संयुक्त राज्य गुलाबी / फ्रान्स गुलाबी / बेल्जियम
पोर्टेबल सुपर फास्ट-हीट ह्यान्डहेल्ड स्टीमर - गुलाबी / चीन backordered छ र यो शेयर मा फिर्ता छ रूपमा चाँडै जहाज हुनेछ।
पावर (W): १1501०१-१1799 W
पानी ट्याank्क क्षमता (l): <०.0.8 एल
स्टीम अवधि (न्यूनतम): min० मिनट
एंटी ड्राई बर्निंगलाई समर्थन गर्दछ: हो
उत्पाद सामग्री: एबीएस, पीसी, इलेक्ट्रिक हीटिंग मोड्युल।
पावर लम्बाई: १.1.8 मिटर, पूर्ण तामाको पावर कर्ड।
भोल्टेज: ११०V-२110०V (युएसप्लग / ईयू प्लग)
उत्पादन शक्ति: १1500०० डब्ल्यू / -०-H० हर्ट्ज
पानी ट्या tank्की क्षमता: १ 250० मि.लि.
तताउने मोड: इलेक्ट्रिक हीटिंग प्रकार।
प्रयोगको क्षेत्र: कपडा, शर्ट, अण्डवियर, झोला, नेक्टीहरू इत्यादि इस्त्री।
उत्पादन प्रकार्यहरू: इस्त्री, ह्युमिडिफाइंग, कीटाणुनाशक, र बाँझीकरण
उत्पाद वजन: 800g
१1500०० डब्लू लाइट सूचक ह्यान्डहेल्ड आइरन स्टीमर गारमेन्ट कपडा स्टीमरहरू स्टीम आइरन ब्रशेस फलाम इस्त्री इस्त्रीका लागि कपडा निर्जंतुकीकरण मिनी घरेलू उपकरणहरू
यो उत्पादन एक कुशल र वातावरण मैत्री घर सफा र इस्त्री उत्पादन हो, यसको उच्च तापक्रम र उच्च दबाव भाप को लगातार इजेक्शन इस्त्री, नसबंदी, सफाई, आदि को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ सजिलो, घर, होटल, र बाहिरी यात्रा को लागी उपयुक्त। ।
बिजुली आपूर्ति जोड्दै, यसले निरन्तर, उच्च तापक्रम, र दुई मिनेटमा उच्च-दबाव स्टीम उत्पादन गर्न सक्दछ। यो घर सफा गर्न र लुगा इस्त्रीको लागि धेरै उपयुक्त छ।
इस्त्री गर्ने: उच्च तापमानको कडा भापले सजिलैसँग इस्त्री गर्न सक्छ कपडा, पर्दा, पाना, तकिया, आदि, विशेष गरी, ठाडो इस्त्री कपडाको आवश्यकता (जस्तै सूटहरू, आदि), यस उत्पादनको साथ इस्त्रीको लागि अधिक उपयुक्त, उत्पादन हो इस्त्रीको साथसाथै इस्त्री ब्रशको साथ सुसज्जित, तर कपडाको नसबंदी र गन्ध हटाउने।
नसबंदी: उच्च तापक्रम र कडा भापले विभिन्न हानिकारक ब्याक्टेरियाहरूलाई चाँडै मार्दछ र घरको सफाई सुनिश्चित गर्दछ।
सफाई: उच्च तापक्रम र कडा भापले सजिलैसँग तेलको दाग, फोहोर, र मोल्ड स्पटहरू सतहमा र घरका उत्पादहरूको दरारहरूमा पट्टी खन्याउन सक्छ। उत्पादन एक ब्रश, विन्डो ब्रश टाउकोले सुसज्जित छ, उही समयमा उच्च-तापक्रम स्टीमको इजेक्शनमा, वस्तुहरूको सतह सफा गर्न सक्छ, सरल र छिटो सफा गर्न सक्छ, प्रभाव उल्लेखनीय छ।
पानी ट्या tank्क बिभाजन: सजिलो विघटन र पानी जोड्ने, ठाडो ह्या hangingिंग स्टीमर मेसिनको एक कम संस्करण हो, जुन बजारमा धेरै लोकप्रिय छ।
बिजुली आपूर्ति जोड्नुहोस्, पावर इंडिकेटर लाइटहरू फ्लिकर गर्न थाल्छ, तताउने शरीर तताउन सुरु हुन्छ जबसम्म सूचक बत्ती बाहिर आउँदैन, तपाईं प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
अपरेशनको क्रममा, स्टीम बटन थिच्दछ र तालको क्रममा २ दुई सेकेन्डमा ढीला गरिन्छ, र निरन्तर उच्च तापमान र उच्च-दबाव स्टीमको एक ठूलो मात्रा फ्रन्ट नोजलबाट उत्पादन गर्न सकिन्छ।
स्विचमा स्वचालित गिअर पनि छ, जुन स्वचालित रूपमा निरन्तर स्प्रे हुन सक्छ।
नोट: छिटो प्रेस, स्टीम मात्रा मा अस्थायी वृद्धि, तर तुलनात्मक रूपमा कम ब्रश तापमान ब्रश भाप अपर्याप्त बनाउन सक्छ। विशेष गरी कपडा इस्त्री गर्दा, ढिलो प्रेशर बाहिर भाप प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ, उच्च-तापक्रमको स्टीमको उत्पादन सुनिश्चित गर्न, ताकि कपडाहरूलाई इस्त्री गर्न सजिलो होस्।
यो एक सामान्य घटना हो कि कामको बखत शरीरलाई ज्वरो आउँछ। यो उत्पादन एक अधिक तापमान रक्षक संग सुसज्जित छ। यो सुरक्षित र भरपर्दो छ।
१ एक्स ह्यान्डहेल्ड आइरन स्टीमर
१ एक्स लामो कपाल ब्रश टाउको
सम्मानित, छिटो डेलिभरी र उत्पादनहरू जुन कुशल देखिन्छन्
आदेश वस्तुहरू १.13.11.११। मिन्स्कमा, कुरियरले नयाँ वर्षको लागि gift१.१२ लाई सीधा उपहार दिए। मैले भर्खरै यो ट्यूलमा अनुभव गरें। पहिले यो सकियो, छिटो ड्राइभ भयो, केहि स्मूथ गरिएको थिएन। त्यसपछि उनले पुदीना लाई लामो समयसम्म समात्न थालिन्। मलाई लाग्छ यो इस्त्री छ। केवल एक चीज, केहि कारणका लागि, केहि स्थानहरूमा tulle चमकदार गुलाबी तलाक भयो। मलाई स्टीमर मन पर्छ! कूल स्मुथस र छिटो।
डेलिभरी केहि दिनहरू, सोचेभन्दा पनि छिटो! 31.12१.१२ लाई पनि पुर्‍याइयो। नयाँ सालको लागि उपहार मात्र! राम्रो काम गर्दछ, यसको कार्यहरू मैले सोचे भन्दा राम्रो प्रदर्शन गर्दछ! मलाई लाग्छ हार्डवेयरको लागि उत्कृष्ट मूल्य! मैले अगाडि र पनी फोटो संलग्न गरें! द्रुत हात मा यो कसरी भयो। शर्टमा ब्याज रबर हो, यो स्टीम पनि थियो!
अहिले सम्म परीक्षण गरिएको छैन तर धेरै सामानहरूसँग प्याक गरिएको छ, २ on मा अर्डर गरियो र on१ मा प्राप्त भयो